/Blog/garari/Mashandisiro Aungaita Trenbololone Recipe Kugadzira Trenbolone Enanthate Powder 2019
Posted on 05 / 21 / 2019 by Dr. Patrick Young akanyora garari.
Trenbolone E (Trenbolone enanthate) ndeimwe ye steroid iyo inogona kuve yakarongerwa seyakanyanyisa kuwedzera iyo inowedzera kumusasa wemasumbu. Kunyange zvazvo pakutanga kwaishandiswa musimba kukura mune mhuka, kudiwa kwaro pakati pevarimi vemuviri vakakura mumakore akawanda nekuda kwekubudirira kwayo musimba kukura.
Tren E (Trenbolone enanthate) ndiyo yakareba yakareba yakafananidzirwa yeatrobone uye ine nguva yakareba yekuwedzerwa. Somugumisiro, chiyero chacho chakanakirwa kubva mumuviri chinonoka zvakare. Iine hafu yehupenyu hwemazuva gumi namaviri, izvo zvinoita kuti ive nenguva yakaderera nguva. Iyo hafu yenguva-hupenyu, zvisinei, inobatsira kune nguva yakareba anabolic action.
100mg / mL Trenbolone Enanthate recipe ye 100mL
3mL uye 20mL / 60ml seringire ine 18-21 yero nheyo
-Step 3: Shandisai beaker mumubhedha wemvura
Uye wedzera Benzyl Benzoate (BB) uye Benzyl Alcohol (BA) uye fambisa. Iyo yakasvibirira Trenbolone inotanga kuparara muhupfu. Kana iwe uchida kuwedzera kukurumidza kwebasa racho, chengeta danho 3.
Heano michina yeTrenbolone Enanthate inobatsira iyo inounza patafura kana iwe ukasarudza kuishandisa.
Kusiyana nedzimwe steroid iyo musero wehutu hwakaita semvura yekuchengetedza mvura, theTrenbolone Enanthate kuwedzera kwekuwedzera inokonzerwa ne nitrogen kukura, iyo inotungamirira kumusana unogara nekukura.
Kuva mune runyoro rwemasimba ane simba steroids, Trenbolone Enanthate inofanira kunge yava imwe yemaserodi ako aunoda. Kana uri kuronga kutanga kuishandisa, izvi hazvifaniri kukunetsa. Iwe unogona kusarudza kutora kumba kana kutenga Trenbolone Enanthate online.
2019 Nzira yekuita testosterone enanthate homebrew mu 6 nhanho DECA powder-Mazano Ekupedzisira Nzira Yokuita Nandrolone Decanoate (Durabolin)